Rasaasa News – Shan Ruux oo Dabley ku Dishay Duleedka Degmada Raaso
Shan Ruux oo Dabley ku Dishay Duleedka Degmada Raaso
on December 13, 2011 8:09 pm
Jijiga, December 13, 2011 [ras] – War aan ka helay magaalaada Jijiga, ayaa sheegaya in koox dableya oo ka soo talowday xadka Somalia ay ku dileen shan  ruux duleedka degmada Raaso ee gabalka Afdheer.
Wararku waxay intaas ku daraya in dableydu baxsadeen dilka ka dib. Dablayda dilka gaysatay waxay ka tirsan yihiin koox diimeed ka jirta dalka Somaliya oo ka garab dagaalanta Al shabaab.
Hogaamiya kooxdan oo lagu magacaabo Sheekh Cabdiqaadir ayaa hore si tuuga ah ku joogay degmada raaso, kolkii la ogaadayna u baxsaday dhinaca koonfurta Somaliya. Wadadka ayaa hore dhibaatooyin uga gaystay degaanka Somalida Ethiopia.
Sheekh Cabdiqaadir, ayaa la sheegaa in asalkiisu yahay Oromo, laakiin aad u yaqaan afka Somaliga, maadaama uu in badan ku noolaan xerada qaxootiga ee degmada Qoryooley oo ay ku nool yihiin dad Abo ah tan iyo 1964.
Shanta ruux ee ee shalay lagu dilay duleedka degmada raaso, ayanaan wali magacyadooda helin, kolka ugu horaysa ee aan helo waan idiin soo gudbin doonaa.